Babal'inni barnoota Afaan Oromoo Finfinnee sadarkaa maaliirra jira? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBabal’inni barnoota Afaan Oromoo Finfinnee sadarkaa maaliirra jira?
Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee Afaan Oromootiin barnoota idilee kennuu erga eegalee waggoota sadii ta’eera. Kanaanis manneen barnootaa afur qofa keessatti hojiin baruu barsiisuu adeemsisamaa kan ture yoo ta’u, barana ammoo manneen barnootaa mootummaa 126 keessatti Afaan Oromootiin barnootni sadarkaa 1fa kennamaa jira.
Kutaan qophii Gaazexaa Bariisaas jalqabbii hojii baruu barsiisuu Afaan Oromootiin magaalittiitti kennamaa jiru ilaalchisee Roobii darbe manneen barnootaa sadarkaa 1fa kutaalee magaalaa sadii keessatti argaman daaw’ateera. Warraaqsi raayyaa barnootaa Afaan Oromootiin taasifamaa jirus jalqabbiirra jiraatus bulchiinsa Injinar Taakkalaa Uumaatiif injifannoo boonsaa ta’uu hubachuun ni danda’ama.
Ittigaafatamaa ittaanaan mana barumsa Itoophiyaa Tiqdam Obbo Abbichuu Hirphaa akka jedhanitti, manneen barnootaa sadarkaa 1fa Kutaa Magaalaa Araadaa keessatti Afaan Oromootiin barnoota kennuu eegalan 10 keessaa manni barumsasaanii isa tokko. Barattootni Afaan Oromootiin barachuuf ji’a Adooleessaa keessa galmaa’an 347 yoo ta’an, sababa tajaajilli geejibaa dhabameef gara manneen barnootaa birootti jijjiirrachuusaanii dubbatu.
Yeroo ammaas barattootni 121 barnootasaanii idilee haala gaariidhaan hordofaa jiraachuu himanii, meeshaaleen baruu barsiisuus hanga tokko guutameera jedhan. Rakkoon nageenyaa hojii barsiisuu gufachiisu hanga ammaatti isaan qunname kan hinjirre yoo ta’u, darbee darbee garuu hanqinni ilaalchaa hawaasa mana barumsichaa tokko tokkorraa akka calaqqisu ibsaniiru.
Hojii baruu barsiisuu si’eessuuf to’annaan barsiisotaa hanga yeroo dhiyyootti laafaa ture kan jedhan Obbo Abbichuun, wayita ammaa garuu warraaqsi raayyaa barnootaa kutaa magaalichaa cimuurratti argama; fooyya’insis jiraa jedhu. Baay’inni barattoota Afaan Oromoon baratanii yeroof xiqqaatus adeemsa keessa fooyya’uunsaa waan hinoolle ta’uu eeraniiru.
Manni barumsaa Edgat Sadarkaa 1fa ammoo kutaa Magaalaa Addis Katamaatti kan argamu yoo ta’u, waliigalaan barattoota 761 barachaa jiran keessaa kanneen Afaan Oromootiin baratan 440 simatee barsiisaa jira. Kunis mana barumsichaatti barattootni Afaan Oromootiin baratan kanneen Amaariffaan barataa jiran akka caalu kan agarsiisuudha.
Ittigaafatamtuu ittaantuu mana barumsichaa Aadde Yaasmiin Shifaas kanuma kan mirkaneessan yoo ta’u, barnootni Afaan Oromootiin kennamu yeroosaa eegee jalqabuu baatus ammaan tana haala gaariidhaan gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru. Raayyaan barnootaa mana barumsichaas barnootni afaanota lameeniin kennamaa jiru akka milkaa’uuf tattaaffii olaanaa taasisaa jiraa jedhan.
Barattootni fageenyarraa dhufan garuu sababa tajaajilli geejiba barattootaa addaan citeef baay’ee rakkachaa jiraachuusaaniis himanii, kunis isaanitti ba’aa ulfaataa ta’eera. Mootummaan yeroo dhiyoo keessatti rakkoo kana furuu baannaan barattootni hedduun harca’uunsaanii waan hinoolleedha jechuun sodaa qaban ibsaniiru.
Hariiroon barattoota Afaan Oromoofi Amaaraa baratan gidduu jiru dansaadha jedhanii, darbee darbee garuu walitti bu’iinsi jiraachuu kaasaniiru. Kana furuufis raayyaa barnootaan qindoominaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru.
Biiroo Barnoota Magaalaa Finfinneetti Obbo Abiyyuu Bayyanaa ammoo ogeessa olaanaa sagantaa barnoota Afaan Oromooti. Akka isaan jedhanitti, bulchiinsi magaalichaa waggoota dheeraa booda mirga heerri mootummaa lammiilee gonfachiise keessaa kan “Barnoota sadarkaa tokkoffaa afaan dhaloota ofiin barachuu” jedhu hojiitti hiikaa jira. Barnootni Afaan Oromootiin kennamaa jirus bu’aa heerichaa ta’uyyuu ummatni Oromoo qabsoo hadhaawaa taasiseera; ittis milkaa’eera.
Manneen barnootaa mootummaa sadarkaa 1fa 148 jiran keessaa 126 keessatti Afaan Oromootiin barattootni kuma 39fi 365 barachaa kan jiran yoo ta’u, jalqabarratti hangana deemuunsaa ummata Oromootiif injifannoo boonsaadhaa jedhan. Wayita ammaas raayyaan barnoota Afaan Oromoo qindoomina olaanaadhaan hojjechaa akka jirus himaniiru.
Hojiin baruu barsiisuu Afaan Oromootiin adeemsifamaa jiru akka magaalatiitti jalqaba waan ta’eef, hinaaftotaafi morkattoota hedduu qabaachuusaas beekamee of eeggannoo guddaadhaan hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Hanqinni kitaaba barataafi tajaajilli geejibaa addaan cituun rakkoolee guguddoo qunnaman keessaas ijoodha jedhanii, Biiroo Barnoota Oromiyaa wajjin furuuf mariirra jirra jedhan.
Suurri Iyyoob Tafarraa